FALCELIN: KULLANKA QORSHAYSAN EE SOMALIA IYO SOMALILAND EE DALKA DJIBOUTI (Q:1AAD) | Haldoornews
FALCELIN: KULLANKA QORSHAYSAN EE SOMALIA IYO SOMALILAND EE DALKA DJIBOUTI (Q:1AAD)
June 13, 2020 - Written by admin
Shakhsiyan, mabda’a ahaan, wadda haddalka Somaliland iyo Somalia waxa aan u arkaa waddo aan waddo kale ka horeyn marka ay noqoto xal-u-helista arrinta la xidhiidha qaddiyadda dadka reer Somaliland;
Wakhtigan se hadda uma arko in wadda-haddalka Somalia iyo Somaliland in uu u midha-dhali karo si dadka reer Somaliland manfac mustaqbal uu ugu jiro, se taa caksigeedda iyadda lagu guurayo si loo fushado dano siyaasi ah. Sababtu waa intan:
— Maamulkan Madaxweyne Farmaajo waxa ku yar “daacadnimada iyo maskax-furnaanta” marka la eego arrinta qaddiyadda Somaliland. Taas waxa caddayn u ah sidda ay ula dhaqmeen intii meesha ay joogeenba. Waxkasta oo Soomaalinimo ah habeen uma ay tudhin;
— Maamulka Farmaajo waxa uu hadda ku jiraa wax u eeg (Lame duck). Maamul (Administration) kastaa waxa uu awood sharciyadeed ( Strong Legitimacy) leeyahay ugu badnaan qaybta hore ee muddo xileedkiisa. Haddii ay wakhtigaa ku soo qaateen dagaalka Somaliland, caqligu ma sheegayaa in ay hadda oo bilo u hadheen ay ku khaatumaysanayaan kalgacayl Somaliland iyo xal-raadin? Maya e, murraad ayay leeyihiin. Waa in doorashada soo socota uga faa’iidaystaan siddii dib loogu dooran lahaa, si sax ah amma si khaldan, aragti-bulsho ahaan ay ku wiiqaan mucaaradkooda gudaha IWM;
— Si ay arrintaa u fushadaan, saadaashii, Somaliland waxa la hor luli doonaa “Balaq”! Dhaqaale kooban ayaa lagala hadli. Ballan-qaadyo hor leh oo iskaashi u badan baa lagu af-rogi. Kullamo kale na waa loo ballami. Intan Somaliland ma kafaynaysaa oo kullanka ma ku geli kartaa immika mise si ka fiican baa ay yeeli kartaa? Qoraalo kale ayaynu kaga hadli.
Abdifatah A. Ileeye